स्मार्टफोन बिक्रीमा नयाँ विश्व रेकर्ड कायम, हुवावेले सामसुङलाई उछिन्यो - नेपालबहस
१५ साउन, एजेन्सी । चीनको स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी हुवावेले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा स्मार्टफोन बिक्रीमा नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ । स्मार्टफोन बिक्रीको अनुगमन गर्ने क्यानालिसका अनुसार हुवावेले सामसुङलाई पछि पार्दै पहिलो पटक नयाँ रेकर्ड बनाएको हो ।
क्यानालिसका अनुसार हुवावेका स्मार्टफोनको निर्यात दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा झण्डै एक तिहाईले घटेको छ । क्यानालिसका विश्लेषक मो जियाले चिनियाँ बजारले मात्र हुवावेलाई विश्वको पहिलो श्रेणीको स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीका रुपमा टिकाइराख्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
पुरानो सामसुङ फोन छ ? छ भने साट्नुहोस् र नयाँ लिनुहोस् (फोन पाउने ठाउँसहित)
सामसुङको फाइब जी ग्यालेक्सी ट्याब्लेट सार्वजनिक
Previous articleमन्त्री भट्टलाई ज्यान मार्ने धम्की !
Next articleपानीघट्टसंगै गाउँको इतिहास हराउँदै
बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरेको अभियोगमा दुई पक्राउ